Nezvedu - Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd.
"Sangana nezvinodiwa nevatengi uye upfuure zvinotarisirwa nevatengi"
Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd inyanzvi yekugadzira yehutano hwevanhu uye masiki ekurapa, vachizvikudza seyazvino chiitiko musangano, zvemhando yekugadzira zvigadzirwa zvinosanganisira otomatiki disposable mask Machine, Automatic KN95 mask mashini.
Iyo kambani yakave yakanyoreswa neChipatara michina yekunyoresa chitupa, CE chitupa uye FDA chitupa. Kugutsikana kwevatengi ndicho chinangwa chedu uye kusimudzira kukura kwebhizinesi redu nehurongwa hwakasimba, kuvandudza uye kukwana ndiwo musimboti webhizimusi redu rekutarisa.
Iyo kambani yakarongedza hurongwa hwakakwana hwekugadzika system uye yakafara yekutengesa uye yevhisi network, uye yakatanga hukama hwakanaka hwekudyidzana nemabhizinesi mazhinji. Isu tinotungamira mukutarisira kwemidziyo yekudzivirira nekune dzimwe nyika. Iyo kambani inogara ichiteedzera kune maneja manejimendi ye "kutendeka, chibvumirano chinogara uye nemhando-yakatarisana", uye inopa zviuru zvezvigadzirwa uye zvakagadziriswa mhinduro kune vatengi vayo. Iyo yakakura-hukuru, yakazara uye inyanzvi yekudzivirira zvishandiso bhizimusi mu daquanzhou, ichikupa kuchengetedzwa kwekudzivirira uye yepamusoro-yepamusoro masevhisi. Zvinoenderana nezvido zvako zvakatemwa, tinokupa ruzivo rwehunyanzvi hwekuvona, uye gadzira sosi yekuchengetedza uye hutano kuchengetedza uye chigadzirwa chinogadzirisa izvo zvaunoda chaizvo iwe nesangano rako.
Zvatinokupa hazvisi zvigadzirwa chete, asiwo zvakakwirira mhando mhinduro uye zvigadzirwa masevhisi! Ticharamba tichitevedzera pfungwa yebasa ye "kusangana nevatengi zvinodiwa, pfuura zvinotarisirwa nevatengi", uye kukupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi. Tinotarisira nemwoyo wose kubatana newe!